Ukusekelwa Kwengqondo - Izilwane ezifuywayo zingenye yezindlela zakho ezinhle zokusiza | Bezzia
Izilwane ezifuywayo njengenye yezinto ezinhle ezisekelwa ngokwengqondo
USusana godoy | 10/10/2021 18:00 | I-Psychology
Bangabaphikisi abakhulu bezimpilo zethu kepha futhi nempilo yethu. Ngoba Izilwane ezifuywayo ziye zaba esinye sezixhaso ezinkulu zengqondo ngezizathu eziningi ezahlukahlukene. Ngakho-ke, kulula ukuthi ubazi, ngoba uma ungenazo izilwane eziseduze kwakho, sekuyisikhathi.
Ukwamukela isilwane kuzoba ngenye yezinto ezinhle kakhulu ozozenza empilweni yakho. Hhayi nje ngokunikeza ikhaya nothando olungenamibandela kepha ngoba luzokubuyisela ngezinye izindlela eziningi. Sekuyisikhathi sokuthola ukuthi kungani baba yilabo basekeli bezengqondo esikhuluma ngabo kangaka.
1 Isisusa sokushiya ikhaya
2 Izilwane ezifuywayo zisinikeza inkampani enkulu
3 Ukusekelwa kwengqondo: Bakhuthaza ukuzethemba
4 Bayasisiza ukuthi sibe nomthwalo wemfanelo
5 Ikhipha ingcindezi
6 Sizizwa silondeke kakhudlwana
Isisusa sokushiya ikhaya
Lapho sibhekene nomugqa omubi, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, kubiza thina kakhulu ukushiya ikhaya. Izimo zokukhathazeka noma nokudangala kungavela ezimpilweni zethu ngaphandle kwesixwayiso. Ngakho-ke, kuliqiniso ukuthi kukhona uchungechunge lwezindlela zokwelashwa inqobo nje uma sizibeka ezandleni zochwepheshe. Kepha ngakolunye uhlangothi, izilwane ezifuywayo zizoba ngenye yezinsizakalo ezinkulu zengqondo. Ngoba unesibopho kubo, badinga ukuphuma endlini, bathathe izinyathelo zabo bazikhulule. Lokhu kukukhuthaza ukuthi uziveze noma ngabe akukho win enkulu.
Izilwane ezifuywayo zisinikeza inkampani enkulu
Okunye ukuzwa okungekho muntu okufanele azizwe ukuthi kunesizungu. Ngoba lokhu kwenza ukuthi umuntu awele phansi ngokwengqondo, athathwe yimizwa, engaba yimbangela ebulalayo. Ngakho-ke, izilwane ezifuywayo zizoba khona ukusiza lapho zidingeka kakhulu. Ngaphezu kwakho konke, lapho silahlekelwa othile futhi sidinga ukwesekwa, akukho okufana nezilwane ezinothando olungenamibandela., esizokubona emehlweni abo nasezandleni zabo, ukuze bakwazi ukusiphakamisa kancane kancane, basiphakamise kulowo mthombo esizizwa ngezinye izikhathi kuwo.
Ukusekelwa kwengqondo: Bakhuthaza ukuzethemba
Kungani ukuzethemba kudingekile? Ngoba kuthanda ukuba nemizwa engcono futhi kunjalo, inhlalakahle ejwayelekile. Okuthile okubalulekile nsuku zonke kodwa futhi, ukuze sikwazi ukufeza konke esikuphakamisayo. Kepha kwesinye isikhathi akulula kangako ukumgcina enathi. Manje izilwane ezifuywayo zizosiza ngendlela engakaze yenzeke ngaphambili, ngoba sizobona umsebenzi wenziwe futhi sizozizwa kahle ngokunakekela izilwane zethu. Okuholela ekutheni sizazise kancane ngokwengeziwe.
Bayasisiza ukuthi sibe nomthwalo wemfanelo
Ngeke sazi ukuthi yini esizuzisa ngayo kuze kube yilapho sinayo phambi kwethu. Ngakho-ke, umthwalo wokukwazi ukuba nesilwane kumele ubhekelwe, ngoba uzosisiza nsuku zonke. Uzohlala uzizwa ubandakanyeka emsebenzini onjalo, ngobungani nothando olungenamibandela. Sizokwazi ukuba nentando futhi lokhu kuzokwenza umthwalo ube mkhulu kakhulu. Yini inhloso yakho konke lokhu? Ukuzizwa singcono futhi sizokufeza kusuka ngomzuzu wokuqala. Ngoba ngenxa yesilwane, sizothola imizwa emisha ebesingayazi.
Enye yezinkinga ezinkulu kakhulu esingayithola empilweni namuhla ingcindezi. Lokhu kunikezwa yisigqi sempilo esisiphilayo, ukungakwazi ukufinyelela kukho konke kusenza sizizwe siminca. Kodwa ukuba nesilwane eceleni kwethu kuzosenza sisibone ngenye indlela. Ngakho-ke inkampani yakho kuphela ezosivumela ukuthi siphume kulolu hlobo lwesifo futhi sikwenze kube ukukhululeka noma ukululama kubantu abacindezelekile.
Sizizwa silondeke kakhudlwana
Singasho ukuthi le ngxenye ifana nesifinyezo sazo zonke ezedlule, noma iningi kakhulu. Ngoba nabo sizizwa sihamba nabo, ngaphezu kokukhululeka ngoba baqeda ingcindezi, kanjalo futhi kuzosenza sizizwe siphephe ngaso sonke isikhathi. Sinenkampani ephelele futhi lokhu kusenza sicabange ukuthi akukho okubi okuzokwenzeka kithi. Ngakho-ke, konke kuyinzuzo kakhulu empilweni yethu, yebo, kepha futhi nasempilweni yethu engokomzwelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » I-Psychology » Izilwane ezifuywayo njengenye yezinto ezinhle ezisekelwa ngokwengqondo
Irayisi elinosawoti elinemifino yasekwindla namakhowe